साढे ३ हत्या | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ ४, २०७६ शनिबार ८:२९:४ | रुपक अधिकारी
दायाँ हातमा भर्खरै बजारमा आएको उपन्यास । बायाँमा पानीको बोतल । काँधमा झोला भिरेर अलमल्ल उभिएको मलाई कोही कसैले हेर्दै होला कि ? मलाई थाहा छैन ।
बाक्लो तुँवालोका कारण विमानले उडान ढिलो गरेकाले एयरपोर्टबाट बाहिरिएपछि बल्ल होसमा आएँ । आवेग साथमा थिएन । यताउता हेरेँ । कुहिरोले केही देखिनँ । मात्र एउटा अनुहार जुन मलाई नै हेर्दै मुस्कुराउँदै थियो । लट्ठ थियो मानौँ म कुनै जादु गरिरहेकी थिएँ । ‘आई एम अलाइभ’ गीतको रिङटोन बज्यो मोबाइल झिकें । तर अहँ, यो मेरो मोबाइलमा बजेको थिएन । आखिर अरूको थियो । जसको चाहना मसँग मिल्दै थियो ।
मलाई हेर्दै मुस्कुराउने केटो फोन झिकेर कुरा गर्न थाल्यो । सायद ऊ कसैको पर्खाइमा थियो । अघि उडेको हैन भनेझैँ सुनेँ । उताबाट सायद कुहिरोको कारणले अवतरण नभएको भन्ने जबाफ आएजस्तो छ । अब कहिले उड्छ रे ? भन्ने प्रश्न तेर्स्यायाे उसले । तर जवाफ चाहिँ पाएन पक्का पनि । किनकि मैले भर्खरै भित्र सोधपुछ गर्दा पनि जवाफ पाइनँ ।
म द्विविधामा परेँ । यताउता हेर्ने थालेँ, के गर्ने ? कहाँ गयो आवेग आखिर ? प्रश्न बढ्दै गए । यी आँखाले जबाफ भने पाएका थिएनन् । घरी पछाडि पो छ कि ! भन्दै फर्कन्छु, घरी कुहिरोको मौका छोपेर कहीँ पर्वतले त लगेन, भन्ने सोच्दछु । के गर्ने कहाँ जाने ? केही टुङ्गो भएन ।
त्यत्तिकैमा मेरो नजरमा एक प्रहरी जवान कैद भए । त्यतै बढ्न लागेको थिएँ । फेरि आई एम अलाइभ गीतको रिङटोन बज्यो । यसो पछाडि फर्केर हेरेँ, उसले मोबाइल झिक्यो । फेरि खल्तीमा राख्यो । तर पनि रिङटोन बजिरहेपछि चाहिँ यसपटक मेरै फोन आएको रहेछ भनी हत्तपत्त फोन झिकेँ । नयाँ नम्बरबाट फोन आएको छ । सधैँ त म उठाउँदिनँ । तर, आज पक्कै आवेगले गर्न लगाएको भन्ने सोचेर उठाएँ । म सही थिएँ ।
‘ओई दिदी कहाँ छेस् तँ ।’
‘म यहीँ गेटमा छु । तँ कहाँ छस् बाबु ।’
‘यहाँ मान्छेहरू टन्नै छन् । झोलाहरू छन् । कोही रुँदै पनि छन् । कोही फोटो खिच्दै छन् ।’
‘कहाँ हो.................त्यहाँ कसैलाई बोल्न देऊ त फोन ।’
‘हेल्लो’ , लोग्नेमान्छेको आवाज सुनेँ ।
‘हेल्लो तपाईँ कहाँ हो ? भन्नुस् त म आइहाल्छु, चिन्ता नलिनुस् तपाईँ । म बाहिर आउँदै छु, तपाईँ त्यहीँ गेटमै बस्दै गर्नुस् ।’ उताबाट आवाज आयो ।
‘हुन्छ छिटो गर्नुस् है ।’
फोन काटियो । अघिसम्म चिन्ताले रुन पनि पाएको रहेन छु । अहिले आवेग भेटिएपछि पो आँसु टिलपिलाए ।
कुहिरो खुल्दै गइरहेको थियो । आवेग एउटा भलादमी मान्छेको हात समाएर आउँदै थियो । मलाई देखेर दगुर्‍यो । मैले जुरुक्कै उचालेर अँगालो हालें अनि निधारमा चुमें ।
‘यति धेरै माया लाग्छ भने कसरी एक्लै छोड्न सक्नुभयो ?’ भलादमी मानिसले मलाई प्रश्न गर्नुभयो । म केही बोल्नै सकिनँ ।
आवेगले उसलाई हेर्दै भन्यो, ‘दिदीले छोड्नुभएको छैन । म सानो बच्चा देखेर आफैँ गएँ ।’
ऊ भद्र मुस्कान छाडेर उभिएको थियो । म चुप थिएँ । अनि आवेग पनि चुप लाग्यो । यत्तिकैमा अघि मलाई हेरिरहेको मान्छे मलाई चुप लाग्न इसारा गर्दै बिस्तारै हामीतिरै आयो । भद्र मानिसको आँखा छोप्यो ।
‘को हो ?’ भन्दै दुवै हात समातेर चिन्ने कोसिस गर्दै एकदम खुशी भएका थिए, भद्र मानिस ।
‘जय तँ यहाँ !’
त्यसपछि दुवैले एकअर्कालाई अँगालो हाले । अनि आँखा छोप्ने मान्छेले मलाई नमस्ते गर्दा मैले पनि फर्काएँ । तर जे सुनें अकमक्क परें, ‘नमस्कार भाउजू ।’
‘हैट के भन्छ यो गधा भाउजू, हैन । उहाँ................ए सरी साँच्ची मैले त तपाईँको नाम सोध्नै भुलेछु ।’
‘म आद्रता । तर तपाईँले नाम सोध्न मात्रै हैन भन्न पनि भुल्नु भयो’ मैले भनेँ ।
ए है भन्दै मुस्कुराएर ‘म सुयोग हुँ’, भन्नुभयो भद्र मान्छेले । हामी तीनैजना हाँस्यौ । ‘ऊ चाहिँ मेरो साथी जय । साढे तीन वर्षअघि गायब भएको थियो । आज फेला परेको छ’ सुयोगले भन्यो ।
साढे तीन वर्षअघि गायव बनेको कुराले मेरो अनुहारको रङ एकाएक फेरियो । तर, सायद कसैले मतलब नराखेको हुनुपर्छ । सुयोग र जय गफमा व्यस्त थिए । म केही नभनी चुपचाप त्यहाँबाट हिँडे । कुहिरो पातलिँदै थियो । अलिपर पुगेर पछाडि फर्किएँ । जय एकोहोरो मलाई हेरिरहेको रहेछ ।
‘तिमी किन आएको हो ? कस्तूरीको याद आयो हो ? पछाडिपट्टि तिम्रो आवाज सुन्नासाथ झस्किएँ, तिमी नै थियौ ।’
‘तिमी कहाँ गएकी थियौ ? अघि कुरा गर्दा गर्दै भन त पहिले ?’ मैले प्रश्न गरेँ ।
‘म कहाँ गएँ ? त्यो प्रश्नको कुनै औचित्य नै छैन । तिमी यहाँ किन ? त्यो हो मुख्य कुरा । भन किन आयौ यहाँ ?’
‘तिमीलाई थाहा छ, त्यो दिन पनि तिमी यही निलो कुर्तामा थियौ । औधी राम्री देखिएकी तिमी आहा ! अझ पनि सम्झन्छु, त्यो दिन आँखीभौं मास्तिर नजर पनि माथि गर्दै बायाँ हात दाहिने गालो हुँदै चिउँडोसम्म मुसारेँ ।’
‘तिमी बातलाई मोडेर बच्ने चेष्टा गर्दै छौ । भन किन आयौ ? नत्र म फेरि जान्छु नि । अब तिमीलाई उत्तर नदिएर कहाँ धर पाउँछु, मैले भनें, ‘तिमीले कहिले पो मलाई जित्न दिएकी छौ र ?’ यस्तै कुरा मनमा दौडन थाल्यो ।
‘सत्य केही छैन । अहँ तिमीले विश्वास नै गर्दिनौ । कसरी भनूँ ? केही पत्तो छैन भनेर म वागमतीमा उभिएर पशुपतिको दर्शन गर्दागर्दै कसरी यो चिडियाघरमा आइपुगें ? अहँ म स्वयम्लाई भ्रमजस्तै लाग्दै छ तिमीले कसरी पो विश्वास गरौली र ? तिम्रो मन राख्न केही झुट बोल्नुपर्दछ । अब तर के भनूँ ? जुन तिमीले विश्वास गर्न सकौली ।’ मनमा कुरा प्रवाह हुन थाले मानौं एकान्तमा बसेर कल्पना गर्दै छु ।
‘कहाँ हराएको हँ ?’
‘तिमी ठिक भन्दै छौ, कस्तूरीको याद आयो । तर, तिमीले हो मलाई यहाँ डोर्‍याएर ल्याएको सम्झना छ होला । तिमीलाई पनि मैले विगतमा पुर्‍याएँ ।’
‘मलाई पनि रे, मतलब तिमी पनि सम्झन्छौ र ?’
‘अहँ, तिमी झुट बोल्दै छौ तिमीलाई केही पनि याद छैन ।’
‘म सबै जान्दछु’ मैले आत्मविश्वास देखाएँ, ‘साढे तीन वर्षदेखि बेपत्ता बनेको कुरामा तिमी झस्किएकी थियौ । जुन कुराको जिकिर यहीँ भएको थियो ।’ मैले भनेँ ।
‘अब बल्ल तिम्रो आँखामा तिमी विश्वस्त भएको देख्दै छु । तिम्रो जन्मदिनमा मैले उपहार दिएको निलो रङको सेता बुट्टा भरिएको यो कुर्ता अहिले पनि पहिरिएकै छौ । त्यो दिन पहिलोपटक तिमी यसमा सजिएर आएकी थियौ । त्यो हाम्रो पच्चिसौं भेटघाट थियो । आजकलको हिसाबमा भन्दा पच्चिसौं, अहँ तेइसौं डेटिङ थियो । एअरपोर्ट र मेरो क्याफेमा भएको भेट त संयोग मात्र थियो । त्यसपछिका भेटहरू हाम्रो चाहनाअनुरूप बढ्दै गएको हो ।’
शनिबारको दिन भएकोले म अबेरसम्म सुतेको थिएँ । आई एम अलाइभ भन्दै फोन कराएपछि बिउँझिएँ । तिमीले फोन गरेकी थियौँ । दस बजेसम्म सुतिरहेको छु भनेपछि तिमी मज्जाले हाँसेकी थियौ ।
अनि तयार भएर एक घण्टाभित्र छक्कु बक्कु क्याफेमा आउनू भन्यौ । म उठेँ । सदाझैँ पानी पिएर दिन सुरु गरेँ । त्यसपछि बाथरुम गएँ । अनि आफैंले बनाएको एककप कफी पिउँदै के कपडा लगाउने भनेर सोच्दै थिएँ । यत्तिकैमा तिमीले म्यासेज गरेकी थियौ । त्यसपछि केही नसोची निलो टिसर्ट जसमा लेखिएको थियो ‘स्वतन्त्र म’ लगाएँ । अनि खैरो हाफपैन्ट र कन्भर्स जुत्ताका साथ म होस्टलबाहिर बाहिरिएँ ।
सिँढीबाट ओर्लंदै गर्दा घरबेटी बासँग जम्काभेट भयो । उहाँले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, ‘के हो केटो आज, डेटिङसेटिङ छ कि क्या हो ?’
म पनि मुस्कुराएँ । हैन ऊ त्यहीँ बानेश्वरसम्म हो भन्दै निस्किएँ । तल आइसकेपछि बल्ल याद भयो, बाइकको चाबी र हेल्मेट त हतारका सिकार भएछन् । फेरि दौडँदै दोस्रो तला पुगेँ । आफ्नो कोठाबाट चाबी र हेल्मेट लिएर बाहिरिएँ । बाथरुमबाट तौलियामा निस्किएकी भाउजू मुसुक्क हाँस्दै ‘टाढै बाबु ?’ भन्नुभयो ।
‘हैन भाउजू साथीले बोलाएर बानेश्वरसम्म जान लागेको’, भन्दै निस्किएँ ।
त्यसपछि सरासर तल आएँ । आफ्नो बाइक लिएर बानेश्वरतिर हुइँकिएँ । हतारमा पार्किङ गर्न खोज्दा झण्डै लडेको थिएँ । छक्कु बक्कुभित्र तिमी पहिल्यै आइसकेकी थियौ । म बस्न नपाउँदै टेबलमा दुई कपचिया राखिए । म दोधारमा परें । पिऊँ कि नपिऊँ ? तिमीले मगाएको चिया केही नसोची उठाएँ । हतारमा मुख बिगार्दै पिएँ । मलाई हेरेर कति मीठो गरी हाँस्यौ । मानौं, म तिमीलाई हँसाउन त्यसो गर्दै थिएँ । तर चिनीको मात्रा बढी भएको चियाले गर्दा हो ।
‘किन हतार गरेको ? के अलि बिस्तारै पिउँदा हुन्न ?’ तिम्रो प्रश्न थियो । म केही बोलिनँ । अँ, अनि एउटा चुरोट मागें । एककप चिया अर्डर गरें, ‘चिनी कम है त ।’
चुरोट तान्दै कुर्सीमा बसेँ । तिमीले आश्चर्यमा आँखीभौँ उचाल्यौ तर त्यो आश्चर्य चुरोटको थियो कि गुलियोको ? म प्रष्ट थिइनँ । तिमीले एकछिन मलाई हेरिरह्यौ ।
‘अस्ति त गुलियो रसबरी मीठो भनेर खायौ त, आज चाहिँ किन ?’ तिमीले आश्चर्य पोख्यौ ।
‘कुनैकुनै कुरा गुलिया नै मीठा हुन्छन् । जस्तै तिम्रो मुस्कान, त्यो रसबरी अनि बाबाले पकाउनुभएको खिर । तर चियामा मलाई चिनी कम नै चाहिन्छ ।’
‘एककप चिया टेबलमा आसन ग्रहण गर्न आइपुग्यो । मैले उठाएँ । अनि आनन्दको चुस्की लिएँ । तिमीले प्रश्न ग¥यौ, मुस्कान पनि मीठो, तितो र टर्राे हुन्छ कहीँ ?’
‘अरूको थाहा छैन, तर तिम्रो हुन्छ ।’ मैले भनेँ, ‘तिमी जब झुटो हाँसो निकाल्छौ तब टर्राे र तीतो लाग्छ । जब मनदेखि हाँस्छौ आहा ! कति मीठो त्यो रसबरीभन्दा मीठो लाग्छ ।’
मैले उठेर फेरि एउटा चुरोट लिएँ । सल्काएको मात्र के थिएँ, तिमीले खोसेर भुईंमा फाल्यौ, ‘भर्खरै मात्र खाएको हैन, कति खानुपर्ने ? भन्दै काउन्टरमा पैसा तिर्‍यौ । हामी त्यहाँबाट चुपचाप निस्कियौँ । किनकि मेरो मनमा त्यो बेला त्यहाँ भएका सबैले मलाई हेर्दै होलान् भन्ने डर लागेको थियो । तिमी उठेपछि बल्ल थाहा पाएको थिएँ । तिमी कुर्तामा भएको कुरा तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने मौकासम्म पनि पाइनँ भन्नुपर्दा गलत नहोला ।’
(रुपक अधिकारीको उपन्यास साढे ३ हत्या को एक अंश । २०७६ जेठ ४ गते विमोचन हुँदैछ ।)
गोरखामा विदेशबाट फर्किएका ३७ जना सेल्फ क्वारेण्टीनमा
कोरोना सङ्क्रमित युवक भन्छन्- ‘उपचार त परको कुरा तातोपानी समे...
घरघरमा गएर फोहर उठाउन सरकारको निर्देशन, फोहर बाहिर फाल्नेला...
‘लकडाउन’मा तितरवितर परिवार भन्छन् – फेरि भेट कसो नहोला र !
तापक्रम बढेपछि चल्न थाल्यो हावाहुरी, प्रदूषण कम हुँदा खुल्यो मौसम
कोरोनाले मानव पदचाप समातेर विश्व भ्रमण गर्दैछ
राष्ट्र सङ्घका ८६ कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
'लकडाउन'को प्रभाव हावामा, सिमरा बाहेक सबै केन्द्रमा 'ग्रीन सि...
दाङमै कोरोना परीक्षणको तयारी
चीनले आजदेखि आफ्ना सीमानाका विदेशीको लागि बन्द गर्ने
खाडी र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमणकाे पछिल्लाे अपडेट, सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ
अमेरिकामा अर्को पानीजहाजमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भेटियो